"Hysteria anti-rosiana" - nampitandrina ireo mpizahatany aminy i Russia amin'ny fitsidihana an'i Montenegro
Home » Vaovao momba ny fizahantany » "Hysteria anti-rosiana" - nampitandrina ny mpizahatany i Russia amin'ny fitsidihana ny tany Montenegro
"Hysteria anti-rosiana" - nampitandrina ny mpizahatany i Russia amin'ny fitsidihana ny tany Montenegro
Manatevin-daharana amin'ny fomba ofisialy ny OTAN i Montenegro, hetsika izay lazain'ny maro fa mety hanimba ny fikasan'i Russia hitazona ny toerany any atsimo atsinanan'i Eropa.
Ny alatsinainy teo dia nisy ny fanomanana tao Washington nampiantrano lanonana fandraisana an'i Montenegro hiditra amin'ny fomba ofisialy amin'ny OTAN ary ho lasa mpikambana faha-29 amin'ny tafiky ny tafika tandrefana.
Tonga amin'ny famoizam-po an'i Russia ny fidirana ho mpikambana. Nampitandrina ny mpizahatany i Russia amin'ny fitsidihana ny tany Montenegro raha toa kosa ka voarara ny fanafarana entana any ivelany.
Vao tsy ela akory izay ny mpitondra tenin'ny minisiteran'ny raharaham-bahiny rosiana Maria Zakharova dia nilaza fa “misy hysteria manohitra ny Rosiana any Montenegro.”
Nanampy izy fa mety iharan'ny risika toy ny "fisamborana noho ny antony mampiahiahy na famoahana firenena fahatelo" ny Rosiana raha mitsidika ny firenena Slavy izy ireo. Nivoady koa i Moskoa fa hamaly faty amin'ny fomba politika izany.
Ny governemanta Montenegro dia niaro ny hetsika ho fepetra raikitra ary mandà fa mety hanakivy ny mpizahatany rosiana tsy hitsidika ny firenena.
"Ny iray amin'ireo antony hidirantsika amin'ny OTAN dia ny famoronana fitoniana bebe kokoa, tsy ho an'ny olom-pirenena Montenegro ihany, fa ho an'ireo mpampiasa vola vahiny sy mpizahatany ihany koa," hoy ny praiminisitra teo aloha Milo Djukanovic. “Noho izany, ny tanjonay dia ny hitondra mpizahatany rosiana betsaka kokoa,” hoy i Djukanovic, izay iray amin'ireo hery nanery ny sain'ny OTAN Montenegro nandritra ny taona maro.
Mipoitra any Dubai ny fironana "Hotel arts"
Qatar dia milaza ny olom-pireneny hiala ao Emirà Arabo Mitambatra ao anatin'ny 14 andro